भीमल | मेरो खेस्रा whatever i feel
केही समयदेखि यहाँ मैले नयाँ कुरा लेखेको थिइनँ । अाज जाँगर पनि चलेको छ, मूड पनि र केही फुरेको पनि छ । त्यसैले अन्त कतै नछापिएको Oven Fresh कथा भीमल, यसै ब्लगका लागि मात्र Exclusive.
रातको अँध्यारो र आत्महत्या,
जेष्ठ १७, २०६९ को बिहान ।
ब्यूँझनासाथ सबै स्तव्ध भए । भीमलका सँधै ठाडो रहने शिर निहुरिएको थियो, तुर्लुङ्ग झुण्डिएको थियो । २५० वर्ष पुरानो मानिने बरको अजंगको रुखमा पासो लगाएर मरेछ ऊ । फेदको गोलाई नै १७ मिटर भएको त्यो रुखको विशालतामा उसको मृत शरीर त कति सा…….नो देखिएको ।
कसैले घाँटीको पासो काटिदिएपछि सँधै गर्वले उभिने उसको शरीर भुईँमा पछारियो । ऊ लम्पसार परेको थियो, उत्तानो लडेको थियो डङ्ग्रङ्ग परेर । सँधै हाँसिरहने उसका आँखाहरु निस्तेज आकाश हेरेर टोलाइरहेका थिए । उसको अनुहारमा कुनै पनि भाव थिएन । एक कान दुइ कान मैदान हुँदै यो समाचार जंगलमा डढेलो लागे जसरी फैलियो र सबै त्यतै दौडादौड गरेर आए ।
अहिले भीमलको नीर्जिव शरीरलाई सबैले घेरेर उभिएका छन् । सबैको मनमा एउटै प्रश्न मात्र छ, हँसिलो, फरासिलो, सबैसंग मिल्ने, आफूमाथि गर्व गर्ने र सदैव आशावादी रहने भीमल यसरी अपहत्ते गरेर किन मरेको होला ? यो कुरा त कसैले चिताउन पनि सक्दैनथ्यो । तै पनि उनीहरू केही न केही कारण पत्तो नलगाइ त के बस्थे र ? कपूरले निकै पुरानो कुरा सम्झायो,
“कतै त्यो असफल प्रेमको घाउ अझै भित्रभित्रै बाँकी त थिएन ? पाँचऔंले र भीमलको फाइट पर्‍या’थ्यो नि ?”
भीमल, फिलान्थस् एम्ब्लिका लिन् नामकी सुन्दरी र फाइट
त्यस दिन कपूर र पाँचऔंलेको फाइट परेको थियो । धेरै पुरानो कुरा हुनाले सबैले बिर्सिसकेका पनि थिए । खासमा केही दिन अघि देखि नै दुबैको ठाकठुक परिरहेको थियो । त्यस दिन मुखामुख गर्दागर्दै पछि त हातै हालाहाल भएछ । एकआर्कालाई घाइते नै हुने गरेर हमला गरेका थिए ती दुबैले । हुन त नामैले भने जस्तो अजंगको भीमलको अगाडि पाँचऔंलेको कुनै तुलना नै हुन सक्दैनथ्यो । तै पनि निकै बेर ऊ लडेको थियो । कहाँबाट आएको होला त्यत्रो आँट र तागत । बल्लबल्ल अरुहरुले गएर निकै बेरमा उनीहरुलाई छुट्याएका थिए ।
त्यसको कारण फिलान्थस् एम्ब्लिका लिन् नामकी सुन्दरी थिई । मेलामा एक दिन उसलाई देखेको बेलादेखि नै भीमल उसमाथि मुग्ध भएको थियो । तर, पाँचऔंले पनि भित्रभित्र वर्षों देखि एम्ब्लिकाको सुन्दरताको पुजारी थियो । कस्तो अनौठो नाम हैन त उसको ?
पख्नुस् है, कुनै विदेशी युवती प्रति उनीहरुको आशक्तिको कुरा भन्ठान्नुहोला, एम्ब्लिका उसको वैज्ञानिक नाम हो । हामी मान्छेका पनि हुन्छ नि, सबैले चिन्ने नाम सशांक भए पनि न्वारानको नाम चाहिँ डोरराज भएजस्तो ।
के भन्नुभो ?
हामी मान्छेका भन्या के रे ? यो कस्को कथा त मान्छेको नभए- भन्नुभा ?
मान्छेका बाहेक अरूका कथा हुँदैनन् र ? हामीले देख्न, सुन्न, बुझ्न र लेख्न मात्र नसकेका हौं कि ?
यो मान्छेको कथा होइन ।
त्यसो भए फिलान्थस् एम्ब्लिका लिन् नामकी ती सुन्दरी को हो त ?
उसलाई अमला भन्यो भने चाहिँ तपाईँहरू सबै सजिलैसंग चिन्नुहुन्छ होला नि ।
अमला वास्तवमै सुन्दर थिई । भर्खर यौवनले छोएको हुनाले ऊ धपक्कै बलेकी थिई । ऊ जस्ती सुन्दरी रुख चारकोस वरिपरिका जंगलमा कतै थिएनन् भनेर चर्चा गर्थे अरु रुखहरु । उसलाई देखेर जंगलका ठूलाठूला रुखहरु मात्र होइन, अम्लिसो, खश्रेटो, गन्धेझार, कनासे, भीमसेनपाती बोकेझार जस्ता झीनामसीनाहरु पनि खुइय्य लामो सास फेर्थे । तर पाँचऔंले अरु झारहरूलाई झारपात भन्थ्यो । ९० सेण्टीमिटर भन्दा अल्गो नभए पनि पाँचऔंलेलाई आफूमाथि बढी नै विश्वास थियो । त्यसैले त उसले झार भएर रूखसंग प्रेम गर्योो, त्यसका लागि आफूभन्दा निकै ठुलो र बलियो भीमलसंग फाइट पनि खेल्यो । डेभिड गोलायथसंग लडे जसरी । बिहान चौतारीमा गफ ठोक्न भेला भएकाहरुबाट त्यो खवर सुनेर बूढो पीपलले हरेस खाएको भावमा भनेकोथ्यो,
“खै कली लाग्या हो कि के हो ? कति मिलेर बस्थ्यौं हामी यो जंगलमा ? आजकल त किन हो किन, बातबातमा पाखुरा सुर्कन्छन् रुखहरु ।”
दुवैको चाला देखेर वाक्क भएकी अमला लौ जा त भनेर अर्कैसंग भागेकी थिई, खुसुक्क एक रात । भीमल निकै दिनसम्म विरही भएको थियो । तर केही वर्षमा उसले आफूमाथि नियन्त्रण गरिसकेको थियो । यो त धेरै पुरानो कुरा थियो । अहिले आएर त्यो कुरामा किन आत्महत्या गर्नु र ? सबै अन्यौलमा थिए ।
जंगल, रूख थरिथरिका
त्यो जंगलमा पनि थुप्रै रुखहरु थिए । बिभिन्न थरिका रुखहरु थिए त्यस जंगलमा । सबै रुखका आआफ्नै विशेषताहरु थिए । कुनै अल्गा, कुनै होचा, कुनै खिरिल्ला थिए भने कुनै अजंगका मोटा । कुनै रुखका जराहरु माटोमा धेरै गहिरोसंग गाडिएका थिए, कुनैका निकै परपरसम्म फैलिएका भने कुनै अलिकति मात्र गाडिएका भरमा टिकेका पनि थिए । त्यसैले प्रचण्ड हावाहुरी चल्दा पनि कुनै डेगै नचली अडिरहन्थे त कुनै अलिकति हावा चल्दा नै ढलूँला जस्तो गरी लचकलचक लच्किन्थे पनि । यस्ता कमजोर प्रजातिका रुखहरु कहिलेकहीं आफ्नो धरातलबाट उखेलिएर पछारिन्थे, विस्थापित हुन्थे ।
तर पनि सबै रुखका आफ्नै विशेषताहरु थिए । सालका रुखहरु आफ्नो बलियोपनमा गर्व गर्थे । उनीहरु बेलाबेला भन्थे,
“हाम्रा पुर्खाहरु उहिलेउहिलेका राजा महाराजहरु र अहिलेका हाम्रा पुस्ता आजकलका शक्तिशाली र सम्पन्न मनिसहरुको घरमा मेरुदण्ड, दलीन, फर्निचर इत्यादि बनेर बसेका छन् । हाम्रो योगदानको जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन ।”
एकथरि अर्का रुखहरु थिए जो आफूमा पलाएका पात र लहराहरुमा सञ्जीवनी रहेकोमा गर्व गर्थे । अमलाको बाबु पनि आफ्नो गुणगान गाउन पछि पर्दैनथ्यो,
“हाम्रो फल भिटामिन सिको मुख्य श्रोत हो बाबै ।”
अजम्बरीको त झन् के कुरा गर्नु र ?
“हाम्रो त नामै अजम्मरी, कामै अजम्मरी । पात, डाँठ अथवा जे काटेर फाल न, हमी त्यसैबाट फल्छौं । हामी अम्लपित्त, कमलपित्त, पत्थरी, गर्मीले हुने रोग, मधुमेह, धातु झर्ने, पेट दुख्ने र पोल्ने जस्ता रोगहरूमा काम लाग्छौं, के ठान्या ?”
त्यहाँ रक्तचन्दन पनि थिए ।
आयुर्वेदमा पनि रक्तचन्दन उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुराले उनीहरूको इज्जत नै बेग्लै थियो । हुन त चन्दनद्वय भनेर रक्तचन्दनका भाइहरूको खलक श्वेतचन्दनको पनि बयान नभएको हैन तर केही समयअघि देखि देशका ठूलाठालूहरू रक्तचन्दनको चोरी र तस्करीमा लागेपछि रक्तचन्दनको त भीआइपीमा गणना हुनथालेको थियो । तै पनि सबैभन्दा पाको रक्तचन्दनलाई यो गतिमा ओसारपसार हुँदा वंशै नाश होला भनेर पीर पनि लाग्न थालेको थियो । एकरात ट्रक आधुनिक आरा करौती लिएर आएकाहरूलाई उसले सम्झाउन पनि खोजेको थियो । सुनको फूल पार्ने कुखुरोलाई एकैपटक काट्ने लोभीको कथा पनि सुनाएको थियो उसले । तर तातै खाऊँ-जल्दै मरौं भैरहेका ती पिपासुहरूले उसका कुरा सुनेनन् ।
“जंगलमै कुहिएर जाने तेरा सन्ततिलाई हामीले भारत चीन लगायत संसारका कति मुलुक घुम्न पठाइरहेका छौं । तं त खुसी हुनुपर्छ ।”
त्यसो भनेर रातको निस्तव्धतामा उनीहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई निर्दयतापूर्वक काटेको हेरेर बूढो रक्तचन्दनले धर्धरी आँसु चुहाएको थियो ।
जंगलका सबै रुखहरूलाई आफ्नो नियति भनेको काटिनु र अरूको काम आउनु हो भन्ने थाहा थियो । कसैकसैलाई यसमा गर्व पनि थियो । त्यस्तै गर्व गर्नेहरूमा एउटा थियो, भीमल ।
भीमलका प्रजाति थरिथरिका कागज बनाउनका लागि प्रयोग हुने रुखका रुपमा चिनिन्थ्यो । भीमल सबैलाई भेला पारेर भन्ने गर्थ्यो,
“कागज भनेको निकै ठूलो कुरा हो बाबै । तिमीहरूलाई थाहा छ, कागजले मानिसका कति ठुलाठूला काम गर्छ ?”
अरू रुखहरू उत्सुक भएको देखेर आनन्द मानेर ऊ भन्थ्यो,
“कागजको सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको कागजमा लेखिन्छ । लेखिनु भनेको निकै महत्वपूर्ण हो । कुनै पनि कुराको स्विकृति, सहमति र स्वीकार गर्नू हो लेखिनु । अभिव्यक्त हुनु हो लेखिनु । स्वतन्त्र हुनु हो लेखिनु ।”
आफ्ना हाँगाहरूलाई जोरजोरले उचाल्दै, घोक्रो स्वरमा भन्थ्यो ऊ,
“हामीमा- एउटा मन र अर्को मनलाई जोड्ने भावना लेखिन्छ, प्रेम पत्र । हामीमा- मानिसको उपलव्धि र विकासको कथा लेखिन्छ, ईतिहास । हामीमा- ठूलाठूला सहमति लेखिन्छ दस्तावेज, सन्धि लेखिन्छ र युद्धविरामका घोषणा लेखिन्छ । हामीमा- सत्य लेखिन्छ, असत्य पनि लेखिन्छ । भ्रम, वाद, विचार र कहिलेकहीं पूर्वाग्रह लेखिन्छ । कल्पना, सपना, भविष्य सब हामीमा लेखिन्छ ।”
सबै मन्त्रमुग्ध भएर उसलाई हेरिरहन्थे, उसको गर्व ।
तर उसको व्यक्तिगत गर्वको कुरा यति मात्र थिएन । उसलाई आफ्नो खलकले पाउन लागेको एउटा अर्को उपलव्धिको गर्व थियो ।
एउटा देशको नयाँ सम्विधान लेखिने भएको थियो उसको खलकमा । आहा…….त्यो भन्दा ठूलो अरु के हुन सक्छ ? सिंगो देशको भविष्यको योजनाको खाका लेखिने भनेको सबै रुखका कागजहरूले कहाँ पाउँछन् र ? त्यही भएर आफ्ना दाजुभाइहरू काटिँदा सँधै आँशु हुने उसका आँखाहरूमा त्यसदिन साराका सारा सानाठूला भीमलहरू छप्काईँदा पनि स्वाभिमानको राप थियो, उज्यालो थियो । आफूलाई पनि त्यो कागज बनाउन कहिले लग्लान् भनेर कुरि रहेको पनि थियो ऊ । तर नलगे पनि आफ्ना दाजुभाईले खलककै नाम उँचो बनाउने कुराले नै ऊ खुशी थियो ।
भीमल केही दिन अघिदेखि त्यो सम्विधान लेखिने दिन गन्न थालेको थियो । दिन जतिजति नजीक आउँदै गयो, भीमलको गर्धन पनि त्यतित्यति मोटो र नाकका पोहोराहरू त्यतित्यति नै फुल्दै गइरहेका थिए ।
किन हो किन भीमललाई केही न केही समाचार अवश्य आउँछ भन्ने पूर्वाभाष भैरहेको थियो । दिनभरि नै भनेजसो ऊ घाँटी तन्क्याइतन्क्याइ चारै दिशा तिर आफ्ना उत्सुक आँखाहरू डुलाइरह्यो । रात झमक्क परेपछि मात्र उसले त्यसको आश मार्योक । भोलिपल्ट उसको निन्द्रा कागको कर्कश स्वरले खुल्यो । काग उसकै कान निर कराइरहेको थियो, उसैलाई हेरेर ।
“शुभ शुभ बोल् कौवा, शुभ शुभ……”
आँखा मिच्दै भीमल बर्बरायो ।
कागले जे समाचार सुनायो, त्यो भीमलका लागि अकल्पनीय थियो ।
कुरो मिलेनछ कसैको । जति गरे पनि केही लागेन छ । सम्विधानसभा बिगठन भएछ ।
निकै बेरपछि उसले पराजित स्वरमा कागलाई सोध्यो,
“अनि हाम्रा खलकलाई के गर्ने भए त कौवा ?”
कागले पनि एकछिन कान कनायो । भनौं कि नभनौं जस्तो भावमा कागले भन्यो,
“सम्विधानै नलेख्ने भनेपछि तिनको अहिलेलाई केही कामै भएन ।”
“कतै तिनका सलाई त बनाएनन् आगो लगाउने ?” भीमल त्रस्त भयो ।
“कागज त कागजै बनेका छन शहर गएर, तर तपाईंले चाहेको जस्तो पेपर हैन ।”
“कस्तो पेपर त ?” भीमलले थर्थर कामेको शंकालु स्वरमा सोध्यो ।
कागले अमीलो मुख लगाएर भन्यो, “ट्वाइलेट पेपर”
भीमल दिनभर झोक्रयायो,
अनि रातको अँध्यारोमा उसले आत्महत्या गर्‍यो ।
बिहान उठेर हेर्दा सबै स्तव्ध भए ।
भीमलका सँधै ठाडो रहने शिर निहुरिएको थियो, तुर्लुङ्ग झुण्डिएको थियो । गहिरोसंग धरातलमा गाडिएका उसका जराहरू उखेलिएका थिए, हावामा झुण्डिएका थिए ।
निष्प्राण जराहरू हावामा फिर्फिर हल्लिरहेका थिए ।
« व्यर्थका विवादहरु
आयो शार्क »
माई पोखरी https://t.co/mgtXc8Ht7jother side	3 hours ago
Rain... Ilam pscp.tv/w/cFcqvDFlZFFu…other side	9 hours ago
RT @JanakPoudyal: निम्तो आइपुग्यो, अब यो निम्तो यहाँ मैले पनि सबैका लागि बाँडे है त । https://t.co/Kva2sphnHOother side	10 hours ago
Thank you organisers of #IlamLiteratureFestival for making itamemorable experience. Esp #BimalBaidya https://t.co/8XCwX6a20cother side	12 hours ago
Thanks:-) twitter.com/binsija/status…other side	15 hours ago